Agromart | Agricultural Marketplace Nepal बाख्रा पाल्ने तरिका – Agromart
Q 1. कति बाख्रा चाहिन्छ चिज उत्पादन गर्न ?
Q 2. चित्लाङ्गको त्यस्तो व्यवसायीको नाम के हो ?
Q 3. बाख्राको दूधबाट चिज बनाउन सकिन्छ भन्छन् के नेपालमा यस्तो प्रचलन छ ?
Q 4. कस्ता/कस्ता विवरणको अभिलेख राख्नु आवश्यक हुन्छ ?
Q 5. बाख्रापालन व्यवस्थामा अभिलेख राख्नु के आवश्यक हुन्छ ?
Q 6. अचानक बाख्राको पेट फुल्ने र छटपटाउने गरेमा कस्तो उपचार गर्नु पर्छ ?
Q 7. बाख्राले कुनै विषादी खाएर विरामी भएमा कसरी तुरुन्त उपचार गर्ने ?
Q 8. आन्तरिक परजीवीलाई रोकथाम गर्न कस्तो उपाय अपनाउनु पर्छ ?
Q 9. साधारणतया बाख्रामा लाग्ने आन्तरिक परजीवीहरु (Internal Parasite) के के हुन ?
• नाम्ले जुका • फित्ते जुका
• गोलो जुका • फोक्सोमा पाईने जुका
•कक्सिडियोसिस (रातो छेर्ने रोग)
Q 10. सामान्यतया बाख्रामा लाग्ने बाह्य परजीवीहरु के के हुन ?
Q 11. बाख्रामा लाग्ने प्रमुख सरुवा रोगहरु के हुन ?
Q 12. सरकारी सहयोग पाउन बाख्रा पालन व्यावसाय दर्ता गर्नु पर्छ ?
Q 13. व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्दा सरकारबाट कुनै सहुलियत पाइन्छ ?
Q 14. वीमाको प्रिमियममा सरकारी सहुलियत के छ ?
Q 15. बाख्रा, बोका तथा बाख्रा खोर/गोठको वीमा हुन्छ ?
Q 16. बाख्रा पालनमा अभिलेख (Record Keeping) को कस्तो महत्व छ ?
Q 17. बाख्रामा लाग्ने ६ मासे रोग के हो ?
Q 18. बाख्राको खुर कुहिने रोग Footrot भनेको के हो ?
Q 19. बाख्रालाई बहुलाएको कुकुरले टोक्यो के सुई लगाउनु पर्छ ?
Q 20. के बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान हुन्छ ?
Q 21. बाख्राको प्रजनन् सिजन के हो ?
Q 22. बाख्राको लागि (दाना) आहारको कस्तो वन्दोवस्त हुनु पर्छ ?
Q 23. बाख्राको लागि घाँस खेति पनि गर्नु पर्छ ?
Q 24. व्यवसायिक बाख्रा पालनको लागि राम्रो जातको माउ बाख्रा/बोका कहाँ पाइन्छ ?
Q 25. बोकालाई खसी बनाउन कुन उमेर राम्रो हुन्छ ?
Q 26. के बाख्रा दूध उत्पादनको हिसावले पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ?
Q 27. कस्तो बोका व्याडको लागी छान्नु पर्छ ?
Q 28. बाख्राले मन पराउने डाले घाँसहरु के के हुन् ?
Q 29. चरन डाले घाँसको व्यवस्था कस्तो चाहिन्छ ?
Q 30. बाख्राको खोर कस्तो हुनु पर्छ ?
Q 31. कुन जातको बाख्रा पाल्नु राम्रो हुन्छ ?
Q 32. कति बाख्रा पालेर व्यावसायिक बाख्रा पालन शुरु गर्नु राम्रो हुन्छ ?
Q 33. कस्तो उमेरको बाख्रा किनेर गोठ शुरु गर्नु राम्रो हुन्छ ?
Q 34. कति संख्याको माउ बाख्रा भएको बथानमा बोकाको कति हुनु पर्छ ?
Q 35. बाख्रा फार्म शुरु गर्न के के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ?
Q 36. आन्तरिक परजीवी (गोलो जुका,फित्ते जुका, नाम्ले) गोठमा फैलिए उपचार कसरी गर्ने ?
Q 37. बाख्रामा लाग्ने किर्ना ,जुम्रा, लुतो जस्ता वाह्य परजीवीहरु नियन्त्रण कसरी गर्ने ?
Q 38. पी.पी.आर. को खोप कहाँबाट पाउन सकिन्छ ?
Q 39. बाख्राहरु अचानक धेरै मर्ने ,उच्च ज्वरो आउने, छेर्ने, मुख र जिव्रोमा घांउ देखिने खोक्ने लक्षण देखिए कस्तो रोग हो त्यो ?
Q 40. बाख्राको मुख वरिपरी घांउ देखिने पिप्रा बगेर कान ,जिब्रो तर्फ पनि बढेकोमा के गर्नु पर्ला ?
Q 41. बाख्राले छेर्ने, नखाने र दुव्लाउदै जाने हुदाँ के गर्नु पर्ला ?
Q 42. बाख्राहरुले खोक्ने सिंगान बगाउने गर्दा के गर्नु पर्ला ?
Q 43. बाख्राले छेर्ने / सिंगान बगाउने लक्षण देखाएमा के गर्नु पर्ला ?
Q 44. बाख्राले राम्रोसंग मन लगाएर नचर्ने/नखाने हुदा के गर्नु पर्ला ?
Q 45. बाख्रा बाली नजाने समस्या पर्दा के गर्नु पर्ला ?
Q 46. ब्याएको बाख्राको पाठा/पाठीलाई दूध कम भएमा के गर्ने ?
Q 47. बाख्राको माउ छनौट कसरी गर्ने ?
Q 48. अहिले नयाँ जातको अफ्रिकी बाख्रा राम्रो छ भनिन्छ नि ?
Q 49. नेपाल सरकारबाट सिफारिश भएका बाख्राका विकासे जात के के हुन ?
Q 50. नेपालमा पालिने स्थानीय बाख्राको प्रमुख जातहरु के के हुन ?